5 Fikradaha Ku-Xoqashada Wear - Dhimashada Lacagta ah
Home » blog » 5 Workout Wear Fikirka
Wakhti kasta oo aad shaqeyneysid, qof kastaa wuxuu leeyahay maalmo markuu isagu ama iyadu aanay dareemaynin inuu aadayo jimicsiga. Maalmahaas oo kale, way sahlan tahay inaad sariirta joogtid oo aad garaacdid badhanka gambaleelka. Si kastaba ha ahaatee, waad ku dhiiri gelin kartaa naftaada inaad sii haysato shaqeynaya adoo iibsanaya qalabka isboortiga saxda ah.
Yaa neceb dhowr kabood oo cusub? Haddii aad rabto waxyaabo dhiirigelin ah, waxaad u baahan tahay inaad ku darto laba kabo oo qummaati ah si aad u hesho qalabka isboortiga. Haddii ay suurtogal tahay, waa inaad doorataa laba qof oo isku xira inta badan dharkaaga jimicsiga. Markaad sidan sameyso, waxaad bilaabi doontaa inaad naftaada wanaag dareento oo aad noqoto diyaar u tahay in lagu dhufto jimicsiga wax ugu horeeya subixii.
Haddii aad jeceshahay kabaha dhalaalaya, waxaad xitaa bilaabi kartaa inaad xirato meel ka baxsan jimicsiga. Miyaad u baahan tahay caawimaad si aad u soo qaadato labada qof ee saxda ah? Waa inaad ku dhufatid dukaanka alaabooyinka isboortiga xaafadaada oo weydiiso caawimaad mid ka mid ah shaqaalaheeda. Mid ka mid ah xubnaha shaqaalaha ayaa kaa caawin doona inaad hesho labada nin ee saxda ah ee u dhigma meelaynta cagtaaga iyo kala-duwanaansho.
Haddii aanad heli karin midabkaaga doorashada, waa inaad ka eegtaa internetka. Waxaad u baahan tahay inaad taxadar leedahay markaad iibsaneysid kabaha interneetka si aad uga fogaatid iibsiga cabbirka khaldan. Hubi in aad eegto jaantuska cabbirka weyn sababtoo ah dhammaantood isku mid ma ahan.
Waa inaad ku maal gashaa dharka isboortiga ee aad gashan karto meel ka baxsan jimicsiga. Markaad dhar gashid dhidiyo jilicsan, waxaad dareemi doontaa inaad ku dhejisay bustayaal jilicsan. Haddii aad uur qaadid wakhti markaad beddeleysid jimicsiga, waa inaad tixgelisaa inaad xirato dhididkaaga si aad u shaqeyso sababta oo ah qoobka dharka goobta shaqada way ka yaraatay.
Haddii aad dhar dhaamiso oo aad shaqeyso, uma baahnid in aad iska beddesho toban daqiiqo ka hor inta aadan ku dhufan qolka jimicsiga. Intaa waxaa dheer, in aad xirato dharkaaga jimicsiga banaanka qolka jimicsiga wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si xor ah u socoto maalinta oo dhan. Marka aad xiran tahay dhar raaxo leh, waxaad dareemi doontaa waxyaabo badan oo aad u dhiirrigelisid in aad kor u qaaddo jaranjarada intii aad socon lahayd.
Waad ku mahadsantihiin kala duwanaanshahooda, rooggoobku wuxuu ka qalinjebiyay dharka qoob-ka-ciyaarka si uu u xajisto. Marka aad wax iibsaneysid, waxaad ku imaan doontaa silhouettes kuwaas oo aad u qalabeysan, qaabab badan oo waaweyn, garaafyo badan, iyo dhar jilicsan. Haddii cimiladu ay caajis tahay, waxaad sameyn kartaa labbo dabeecadood oo iftiin leh si ay u soo qaadaan jinniyadaaga.
Haddii aad dukaameysi ku sameysid dhowr leggings online, waxaad u baahan tahay inaad ogaato qiyaasta saxda ah. Tusaale ahaan, haddii aad iibsaneysid xayeysiisyada wax lagu iibiyo sida MoveU Dhageysiga Khaaska ah, waa inaad bixisaa qiyaasta saxda ah.
Waxaad soo bandhigi kartaa dhinacaaga cayaaraha adigoo xiranaya kubada waalan ee jimicsiga. Tani waxay sameyneysaa in laga yareeyo xoogaa madadaalo ah oo dhiiri galiya jimicsiyada kale ee jimicsiga si ay u bilaabaan sheekooyin. Iska hubi inaad dooratid sheeko kugula hadli doonta oo muujiya dareenkaaga. Waxaad ka iibsan kartaa dusha sare ee khatarta ah ama aad si gaar ah u sameyso.
Waxaad u baahan tahay inaad doorato sharraxaad gaar ah oo kuu ogolaanaya inaad alaabtaada ku dhajiso oo aad ku qanciso shakhsiyaddaada. Haddii aad jajabi karto qosol kasta mar kasta oo aad aragto aragti sare ee muraayada, waxaad awoodi doontaa inaad kor u qaado naftaada.
Miisaanka isku dhafan ee kor u qaada jilibka wuxuu kordhin doonaa wareegga lugahaaga wuxuuna kaa dhigi doonaa mid wanaagsan. Waxaa intaa dheer, waxay aad ugu fiican yihiin kahortagga xididdada xajmiga iyo waxay hagaajin kartaa waxqabadkaada jimicsiga. Miisaanka cadaadiska ayaa sidoo kale ka hortagaya raasamaalka maadooyinka muruqyada muruqyadaada, taas oo dhab ahaantii tahay wax fiican in la tixgeliyo habka muruqyada bararaya ka dib markii uu jimicsigu sameeyo.
Haddii aad isweydiinayso in aad gashanayso gaaban ama dhejis dharka, waxaad ku heleysaa laba sharabaad oo ah sharaabaad aad u fudud. Haddii aad had iyo jeer ku joogto cagahaaga intaad shaqada ku jirto, waa inaad tixgelisaa inaad xirato sharabaadahaaga suufka si aad u shaqeyso. Habkan, waxaad yeelan doontaa muddo dheer, taas oo macnaheedu yahay inaad dib u heli doonto faa'iidooyinka ugu badan.
Qalabaynta jimicsiga, madadaalada, iyo qalabka isboortiga ayaa kuu oggolaanaya gaadho hadafyada jirdhiska marnaba. Waxaa intaa dheer, waxaad dareemi doontaa inaad ka wanaagsan tahay naftaada, taas oo macnaheedu yahay in aad ku jiri doonto si aad u hesho nolol caafimaad leh.
April 26, 2018 Jimicsiga blog, Dharka No Comment